कस्तो मोबाईल किन्नु ठिक होला? - IAUA
कस्तो मोबाईल किन्नु ठिक होला?
ramkrishna December 20, 2016	कस्तो मोबाईल किन्नु ठिक होला?
नेपाली बजारमा रु १००० देखी रु १००००० भन्दा बढीको विभिन्न कम्पनीका स्मार्ट माबाईल हरु पाईन्छन् । मोबाईल किन्नु पूर्व कुन कम्पनी तथा कुन अपरेटी सिस्टम भएको किन्ने हो ध्‍यान दिन जरुरी छ । नेपाली बजारमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम (गुगल), आइ.ओ.एस अपरेटिङ सिस्टम (एप्पल), वेन्डोज अपरेटिङ सिस्टम (माइक्रोसफ्ट) र ब्लाकबरी अपरेटिङ सिस्टम (ब्लाकबरी) उपलब्ध छन् । त्यस मध्येपनी बजेट र धेरै बिशेषता भएका कारण नेपाली बजारमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम बढी लोकप्रिय छ । त्यस कारण यहाँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको फोन किन्दा आफ्नो बजेट अनुसार कस्तो बिशेषता भएको किन्ने भन्ने चर्चा गरिएको छ ।
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम गुगलले बनाएर मोबाईलका हाडवेयर निर्माता कम्पनीहरुलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउने भएकाले अनगिन्ती कम्पनी हरुले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएको फोन बनाएका छन् । त्यसैले मोबाइल खरिद गर्नु पुर्व ब्राण्डमा ध्यान दिन जरुरी छ । बिक्रिपछिको सेवा, पर्याप्त सर्भिस सेन्टरहरू छन् छैनन् भन्ने कुरा विचारगरेर मात्र खरिद गर्न जरुरी छ ।
अपरेटिङ सिस्टम भर्सन:
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका विभिन्न भर्सन हुदै पछिल्लो भर्सन एन्ड्रोइड ६ (मार्समेलो) बजारमा उपलब्ध छ । मोबाईल खरिद गर्नु पुर्व हाल मोबाईलमा भएको एन्ड्रोइड भर्सन नयाँ हो होईन साथै कम्पनीले भविष्यमा अपडेट गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ वा छैन ध्यानदिनु पर्छ । किनेभने यदि तत्काल रहेको अपरेटिङ सिस्टममा भएका कमजोरीहरुलाई पछिल्लो अपडेट बाट क्रमश: सुधार गर्ने गरिन्छ त्यसकारण भविष्मा १-२ पटक नयाँ अपडेट दिने भनि उल्लेख गरिएको फोन खरिद गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
कसरी थाहा पाउने कम्पनीले भविष्यमा अपडेट दिन्छ दिदैन भन्ने?
कम्पनीले फोन घोषणाको वेलामा नै भविष्यमा अपडेट दिने नदिने भन्ने उल्लेख गरेको हुन्छ त्यसको लागी www.gsmarena.com मा हेर्न समेत सकिन्छ ।
फोनमा हेरिने भिडियो, फोटो एवम गेम खेल्नको लागी डिस्प्लेले महत्व पूर्ण भूमिका खेल्दछ । हामी फोन किन्दा भिडियो हेर्न, गेम खेल्न सजिलो हुन्छ भन्दै ठुलो स्क्रिन भएको फोन खोज्दछौँ तर यथार्थमा ठुलो स्क्रिन हुँदैमा राम्रो क्वालिटि हुँदैन त्यसको लागी डिस्प्लेको रेजुलेसन साथै कस्तो प्रकृतिको डिस्प्ले (TFT,LCD,Super Amoled) राखिएको छ त्यसले प्रभाव पार्दछ । डिस्प्ले रेजुलेसन को कुरागर्दा 720p HD 1080p HD भएका फोन र Super Amoled सबैभन्दा राम्रो डिस्प्ले प्यानल हो ।
स्मार्ट फोनमा ब्याट्री कम खप्ने समस्या हुन्छ । यदि डिस्प्ले 720p HD भएको फोन किनेमा २२०० मिलिएम्पियर भन्दा बढी ब्याट्री क्षमता र 1080p HD भएमा २५०० मिलिएम्पियर भन्दा बढी ब्याट्री क्षमता भएको हेर्ने ।
२५० एम.बि. देखी ४ जि.बि. –याम भएका मोवइल उपलब्ध छन् । आफ्नो बजेट अनुसार कम्तीमा पनी १ जि.बि. –याम भएको मोवाइल हेर्नुपर्छ । एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा व्याकग्राउण्डमा एप्सहरु चलिरहने हुँदा अपरेटिङ सिस्टमले बढी मात्रामा –याम ओगट्दछ ‍। त्सकारण बढी क्षमता भएको –याम भएमा गेम खेल्दा, धेरै एप्स खोल्दा फोटो, भिडियो हेर्दा तथा खिच्दा ह्याङ हुने कम हुन्छ ।
कम्पुटरमा जस्तै मोवाईलमा पनी प्रोसेसर हुन्छ । जसमा ड्युल कोर, क्वाडकोर, हेक्जाकोर अक्टाकोर भिन्न क्षमतामा पाईन्छ । एक्सोनिस (सामसुङ), स्नापड्यागन, तया मिडियाटएक कम्पनीका प्रोसेसर भएका फोन बढि पाईन्छन । विशेषत स्नापड्यागन कम्पनिको राम्रो मानिन्छ । बजेट अनुसार कम्तिमा क्वाडकोर प्रोसेसर भएको मोबाइल खरिद गर्नु पर्छ ।
क्यामेरा धेरै मेगापिक्सल हुँदैमा फोटो राम्रो आउने होईन । हामी धेरैको सोचाई जति धेरै मेगापिक्सल त्यति राम्रो फोटो भन्ने छ तर फोटो राम्रो आउन फ्यास लाइट, लेन्स क्वालिट एवम सेन्सर मा पनि निर्भर हुन्छ ।
मोबाईलमा मेमोरी कार्ड जान्छ जाँदैन, मोबाईलको आन्तरिक स्टोरेज कति छ हेर्नु पर्छ । जति आन्तरिक स्टोरेज छ त्समा २ देखी ५ जि.वि. फोनको अपरेटिङ सिस्टमले ओगट्दछ । त्यसैले यदि मेमोरी कार्ड जान्छ भने ८ जि.वि. आन्तरिक स्टोरेज भएमा हुन्छ तर मेमोरी कार्ड जाँदैन भने ३२ जि.वि आन्तरिक स्टोरेज भएको फोन खरिद गर्नु ठिक हुन्छ ।
मोबाइलको ब्याट्री जति धेरै पावरको भयो चार्जिङ समय त्यति धेरै समय लाग्दछ । तर (Samsung, Sony, Motorola, LG) जस्ता कम्पनीहरूले quick charging विशेषता भएका मोवाईलहरु बनाएका छन् जसले गर्दा 3000/3500 मिलिएम्पीयर ब्याट्री भएको फोन पनी 1/1.5 घण्टामा चार्ज हुन्छ । नेपाल जस्तो १५ घण्टा लोडसेडीङ हुने देशमा यो विशेषता अति उपयोगी हुनसक्दछ ।
फोन खरिद गर्ने सोचमा हुनुन्छ भने पहिले कुन ‍ ब्राण्ड किन्ने, कति बजेटको किन्ने र कस्तो विशेषता आवश्यक छ सोहि बमोजिम मुल्य बुझ्न www.rojeko.com www.hotdealsnepal.com www.kyamunepal.com जस्ता नेपाली अनलाइन साइटमा गएर हेर्ने र त्यसको विस्तृत विशेषता र user’s reviews हेर्न www.gsmarena.com मा जाने साथै फोन खरिद गर्दा मोबाइल क्याफेमा गएर खरिद गर्ने किनेभने आजकल मोवाईलको ब्याट्री र हेडफोन साटेर बेच्ने प्रवृति बढेको छ ।
कसरी थाहा पाउने कम्पनीले भविष्यमा अपडेट दिन्छ दिदैन भन्ने???
Previous Previous post: सोलोमोन द्विपमा शक्तिशाली भूकम्प
Next Next post: कुन राशिलाई कुन व्यापार शुभ ? कुन बिषय रोज्दा ठीक ?